Ebuka Companlọọrụ Njem | Save A Train
Ebuka Companlọọrụ Njem
Home > Ebuka Companlọọrụ Njem
Ebuka Companlọọrụ Njem – Ndị ọrụ njem – Ego njem – Companlọ ọrụ Akaụntụ Njem
Nke a abụghị ihe nkịtị na peeji nke ebe anyị bụ ndị njem na ụgbọ okporo ígwè njem ụlọ ọrụ, anyị kpebiri na-eme ka a na-agbanwe agbanwe na peeji nke banyere njem ebuka na ụwa, n'ihi ya, i nwekwara ike ma eleghị anya itinye ego na njem ụlọ ọrụ na-amụba gị onwe gị na akụ na n'otu oge ịba ụba gị larịị nke obi ụtọ site na njem site na ụlọ ọrụ ndị njem ndị a.
Anyị anakọtara ozi bara uru banyere ụlọ ọrụ njem ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru, ya mere site n’agu akwukwo a, ị nwere ike ịmụtakwu banyere profaịlụ ha, ọnụahịa ngwaahịa, na ebumnuche, nke ga - emecha mee ka o nwekwuo ohere ịme ego bara uru.
Kedu ihe data ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem na-aba uru, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ arụmọrụ akụkọ ihe mere eme ha, ya mere, ndị a bụ akara ngosipụta dị n'elu, ugbu a na eserese eserese na ụlọ ọrụ na akara.
Akụkọ gbasara Ego
Data dị mma, mana gini bu data nenweghi ozi na ozi oma n’eduba ya, ya mere, nke a bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ebuka na njem ụlọ ọrụ akụkọ sitere na sistemụ usoro mgbanwe ngwaahịa na kwa site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi onwe ha na ndị nyocha. Nke a bụ data kachasị ọhụrụ dị:
Ntinye Aka Na Akaụntụ Akwụkwọ
Akụkọ Expedia Group
AirBnB Inc Akụkọ Akụkọ
Akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi mba ụwa na Marriott
Onye na-enye ndụmọdụ na Tripadvisor
Njem.com (Ctrip) Otu Ngwaahịa Group
Carnival Irughari Stock News
Akwụkwọ akụkọ Royal Royal Stock
Ryanair Holdings Ngwaahịa Ahịa
Ozi Ahịa Ahịa Ahịa
Ọ bụ ezie na njem bụ nnukwu ụlọ ọrụ ọ na-emetụtakwa ndị ọzọ na-egosi ahịa, yabụ anyị kwadebere akwụkwọ ozi mkpụmkpụ ahịa ahịa a, yabụ ị nwere ike ịhụ isi ndepụta ahịa mgbanwe zuru ụwa ọnụ yana nnukwu ozi ndị ọzọ anyị nyere n’elu.
Echiche nke Onwe Anyị Banyere Ego Ndị A Na-eme Ego
Biko chọta n'okpuru echiche anyị na ebuka ọ bụla.
BKNG – Nyere na ọ bụ ụlọ ọrụ njem kachasị ukwuu n'ụwa, anyị na-ama jijiji na ntinye akwụkwọ (BKNG).
PELỌ – Ọ ga-achụ ọtụtụ mmadụ n'oge Covid19 wee si otú a mee ka ọdịbendị ya na-emebi emebi, ya mere echiche anyị bụ Natural na Expedia Group (PELỌ).
ABNB – N'ezie dabere na ọnụahịa, Anyị kwenyere na ọnụahịa kwesịrị ekwesị maka Airbnb (ABNB) kwesịrị ịbụ ọkara uru nke Grouping Booking (BKNG)
ỌB MARR. – maka 2021 anyị bụ ndị bullish na Marriott International (MAR Akara) n'ihi na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem ga-ahụ nnukwu mmụba ozugbo e kwere ka njem ọzọ.
Njem – TripAdvisor na-anwa ịgbanwe ụdị ego ha nwetara, na n'ozuzu anyị na-eche ọdịnaya bụ eze na TRIP bụ ikenyeneke mbiet na ya ọdịnaya na onye ọrụ-eme ọdịnaya na ya n'elu ikpo okwu, anyi bụ Bullish.
TCOM – Nyere Nke ahụ (TCOM) bụ mbu ahia China, obi tọrọ ha ụtọ na China laghachiri ngwa ngwa, Otú ọ dị, TRIP Group nwekwara azụmaahịa njem njem ụwa niile ga-enwe ọ enjoyụ nloghachi nke Njem, Bullish ọ bụ.
MMYT – O siri ike ka anyị nye ndụmọdụ na MakeMyTrip, n'ihi esemokwu China, ma n'akụkụ dị mma, Onodu aku na uba nke India di nma ma kwesiri idi ezigbo nma Covid19.
CCL – Carnival Cruise ngwaahịa ga-agba ume ozugbo ụgbọ mmiri mbụ laghachiri n'ikperé mmiri ahụ emerụghị ahụ, ụbọchị ndị a abịaghị nso, ruo mgbe ahụ anyị bụ ihe okike na CCL.
RCL – Royal Carribian yiri Carnival Cruise na ụlọ ọrụ abụọ ahụ’ Nsonaazụ yiri, Otú ọ dị, isi isi na RCL bụ ihe na-erughị CCL, kamakwa ebe a, anyị ga-anọ na Natural na Royal Caribbean.
RYA – Ryanair bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kachasị ukwuu ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ozugbo emechara ihe mgbochi Europe, ngwaahịa a ga-aga elu nke ukwuu, ma ọbuná ub .u a, anyị chere na ngwaahịa RYA a dị mma maka pọtụfoliyo gị, Bullish.
Anyị na-enweta a nkịtị ajụjụ banyere Save A Train ọrụ, Zọpụta A Train bụ n'ezie a gbaa ụgbọ okporo ígwè website, mana anyi nwekwara ngalaba blog di iche, nke bụ kpamkpam n'efu, ọ bụkwa naanị iji kwalite njem na ụgbọ oloko na nkọwa.
Ugbu a ị nwere echiche dị mma banyere ọnụ ahịa na ozi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ njem, nke a ekwesighi ịkụda gị njem, na mgbe ị na-eme, biko họrọ Save A Train. dị ka ebe nrụọrụ weebụ gị maka ụgbọ oloko na-ejegharị.
Ị chọrọ Embed a page jidesie gị na saịtị, dị nnọọ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-companies-stocks%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)